Apple Cinnamon Oatmeal (Nwee Ọkụ ma ọ bụ Nzuzo!) - Ezi Ntụziaka
uzommeputa maka nwayọ osi nri salisbury ibe ha
iko ole n’ime paụnd 1 paụnd
esi ebipụ aka gburugburu ham
coca cola chicken Ntụziaka na ketchup
ihe a ga-eri na cordon bleu
Ọ dịghị ihe na-amalite ụbọchị dị mma karịa ite dị ọkụ na ahụ ike nke apụl cinnamon oatmeal!
Ntụziaka oatmeal a dị ngwa ngwa jupụtara na nri, antioxidants, fiber, na ike B-vitamin niile iji gafere ụbọchị!
Anyị hụrụ n'anya nri ụtụtụ echiche na-ị na-aga ụbọchị niile na 3 mfe nzọụkwụ!
OATS Jiri agba ochie (akpọkwa ya oat akpọrọ). Ha nwere udidi siri ike karịa otis ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ọ ga-amasị gị iji nchara nchara jiri ọla kọpa mụbaa mmiri mmiri ma sie ha n'akụkụ. Gbakwunye apụl nkeji 15 tupu ha edozi ka apụl ahụ ghara inwe mushy.
UBỌCH. Ngwunye nke mmiri ara ehi na-agbakwunye ude mmiri creamy na nhazi oatmeal a. Otutu ndi umuaka anaghi eri mmiri ara ehi kwesiri igba oru.
Tinye-INS Granny Smith bụ nhọrọ mbụ anyị maka etu o si ejide ọdịdị ya ma gbakwunye ọ aụ tart dị mma. A na-agbakwunye mịrị maka ụtọ ma gbanwee ha maka kranberị (ma ọ bụ mkpụrụ osisi ndị ọzọ a mịrị amị) ma ọ bụrụ na ị hụghị mịrị vaịn n'anya.
Oatmeal na Mmiri Mmiri
Ihe ndị a bụ mmiri iji rie oke. Anyị na-edochi ụfọdụ mmiri maka mmiri ara ehi maka oat creamier mana nke a bụ nhọrọ. Maka ochie ejiri / kpoo, jiri 1 iko mmiri mee 1/2 iko otis.
Gbakwunye nsị nke pecans chopped, almọnd sliced, walnuts, ma ọ bụ mix na mkpụrụ ndị ọzọ a mịrị amị.
Mkpụrụ oyi ma ọ bụ unere oyi kpọnwụrụ dị ukwuu iji kpalie tupu ị na-eje ozi (ma nyere aka mee ka oatmeal dị jụụ iji jeere ụmụaka ozi!).
Odị :dị: Nutskpụ anụ (ma ọ bụrụ na iji) na skillet ruo mgbe ha na-acha aja aja ma na-esi ísì ụtọ. Nke a na-eme ha extra crunchy na flavorful!
Otu esi eme ka Apple Cinnamon Oatmeal
Oatmeal dị oke ọkụ ma na-akasi obi, ọ dịkwa oke mfe iji nri ụtụtụ a dị ọkụ na ahụike dị mma. Top na mkpụrụ osisi, ude pịa, shuga na-acha aja aja, mkpụrụ osisi, ma ọ bụ mkpụrụ osisi na-echekwa.
Sie mmiri, mmiri ara ehi, shuga na-acha nchara nchara, na cinnamon n’ime ite mmiri ruo mgbe ọ bịara n’ọkụ, wee gbazee shuga.
Ghichaa oat, apụl, na mkpụrụ vaịn ma belata okpomọkụ na simmer.
Esi nri na-akpali akpali mgbe ụfọdụ. Wepu si okpomọkụ mgbe oatmeal dị na ọkpụrụkpụ achọrọ ma bido na butter.
Tinye mmiri, mmiri ara ehi, shuga na-acha aja aja, na cinnamon na nnukwu efere nchekwa microwave (nnukwu nnukwu efere maka ọtụtụ nri). Esi nri n'elu ruo mgbe obụpde.
Tinye otis, apụl, na mkpụrụ vaịn na ngwakọta a na-ekpo ọkụ. Nwuo ma kpoo ọkụ na microwave ruo minit 3 ruo 5, ruo mgbe ọka ga-amị mmiri mmiri ahụ. Wepu na ngwa ndakwa nri, nwuo, ma tinye butter.
Ndụmọdụ maka Oatmeal zuru oke
Jiri nchikota mmiri na mmiri ara ehi mee ude mmiri.
Gbanwee cinnamon maka apụl achịcha ose ma ọ bụ ugu paịsị .
Maka uzommeputa a, ọ kachasị mma iji oat ochie (ma ọ bụ nke akpọrepu). Oats ngwa ngwa ma ọ bụ ọka dị mfe ga-adị nro.
Ọ bụrụ na oatmeal gị toro oke, kpalie mmiri ara ehi, ude, ma ọ bụ ọbụlagodi apụl imezi ya.
Anyị hụrụ n'anya na apụl na mkpụrụ vaịn na-agbakwunye ederede, mana nweere onwe gị ịgbakwunye mkpụrụ ma ọ bụ aki oyibo.
More Breakfasts nke Obi
Soseji Cheddar nri ụtụtụ Strata - otu nri-efere
Okpukpo Okpukpo Akwukwo Oha
Nri ụtụtụ Tacos - friza-enyi na enyi
Omuma nri ụtụtụ Sanwichi - eji ofe ulo
Ntụziaka Acai Bowl Dị Mfe - ngwa ngwa & ahụike
Arụrụ n'ụlọ akwa - zuru oke maka brunch
You hụrụ Apple Oatmeal a n’anya? Jide n'aka na ị ga-ahapụ ọkwa na ikwu n'okpuru!
Oge Nkwadebe10 Nkeji Oge nriiri abụọ Nkeji Oge zuru ezu30 Nkeji Ọrụ4 Onye edemedeHolly Nilsson Cinnamon Apple Oatmeal bụ nri ụtụtụ obi ụtọ na ụtọ ụtọ shuga na-acha aja aja! Bipute Ntụtụ
▢abụọ iko mmiri
▢1 iko mmiri ara
▢4 tablespoons agba aja aja ma ọ bụ nụrụ ụtọ
▢1 ngaji pawuda
▢1 ½ iko ochie otis
▢1 Granny Smith apụl pee akwa ma bee
▢¼ iko mịrị
▢1 ngaji bọta
▢pecans chopped, aja aja na ude maka topping nhọrọ
Weta mmiri, mmiri ara ehi, shuga na-acha nchara nchara, pawuda, na nnu.
Kpoo oat, apụl, na mịrị. Belata okpomọkụ ka ọ sie ma sie nri 13-16 na-akpali akpali ugboro ugboro ka mmiri ara ehi ghara ịgba ọkụ.
Wepu si okpomọkụ ma bido na butter. Top dị ka chọrọ na-eje ozi.
Nhọrọ Nhọrọ: mkpụrụ osisi akụ, aki oyibo, ude dị arọ, shuga na-acha nchara nchara
Mmiri ara ehi na-abụghị mmiri ara ehi na-arụ ọrụ nke ọma na nhazi a.
Jiri ogbe ochie (ma ọ bụ nke akpọrepu). Oats ngwa ngwa ma ọ bụ ọka dị mfe ga-adị nro.
Kpalie oge ya mere mmiri ara ehi ya adighi ada n’ala ite.
Calorisị:Ogbe 262,Carbohydrates:49g,Protein:6g,Abụba:6g,Abụba Ajuju:3g,Trans Abụba:1g,Cholesterol:10mg,Sodium:138mg,Potassium:341mg,Eriri:5g,Sugar:iri abụọg,Vitamin A:Ogbe 229IU,Vitamin C:3mg,Calcium:Ogbe 114mg,Iron:abụọmg
IsiokwuApple Cinnamon Oatmeal, kacha mma Cinnamon Apple Oatmeal, Cinnamon Apple Oatmeal, Otu esi Mee Cinnamon Apple Oatmeal N'ezieNri ụtụtụ Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a . img class = ”aligncenter wp-image-212027 size-full” title = ”Mee usoro a dị ụtọ maka cinnamon apple oatmeal ma hapụ ya ka ọ nọdụ ala n’abalị na ngwa nju oyi. Ọ na - eme nri ụtụtụ ngwa ngwa ma dịkwa mfe maka ụtụtụ ndị ahụ na - agba agba! #spendwithpennies #cinnamonappleoatmeal #breakfast #recipe #healthy #quaker #oats #homemade #easy #stovetop ”src =” https://www.spendwithpennies.com/wp-content/uploads/2020/12/SP-Cinnamon-Apple- Oatmeal-SWP-2.jpg ”alt =” Cinnamon Apple Oatmeal n’ime ite nwere aha ”obosara =” 500 ″ elu = ”1000 ″ />